စုချစ်သူ: လေညှင်းထဲက အာအိုင်တီလုလင် သင်္ကြန် (၁၉၉၃ ခုနှစ်)
Posted by စုချစ် at 4/10/2010 01:33:00 PM
ပြန် က ပြ ပါး)
i think guitorist is Sa Tint Wai, he is one of the friends of Chit San Maung.
ဦးဇော်မင်းအောင်ဆိုတာ .. မျက်လုံးလှလှလေးနဲ့ ဆရာလားအမဟင်..။
မ,အေးဆိုတာ ဆံပင်ရှည်ကြီးနဲ့ အမကြီးလားဟင်..
မူဆန်းတိုတာ မူမူဆန်းကိုပြောတာလား မြို့ပြက
တီချယ် ဒေါ်ခင်တင့်ကို ကျနော်လည်းချစ်တယ်..သတိရလိုက်တာ..ချယ်ကြီးကို
အမက သင်္ကြန်ကိုလွမ်းပီး ကျနော်က ကျောင်းကိုလွမ်းသွားတယ်..
တခါမှတော့ သင်္ကြန်အကဆိုတာမကြည့်ဘူးဘူး။ ရိပ်သာပဲဝင်တာများလို့..
ရီစရာကောင်းအောင် သွက်နေအောင် ရေးထားပေမယ့် ဖတ်ပြီးတော့ ဝမ်းနည်းသလိုပဲ။
ဂျစ်... ၂၀၀၁ စလုံးမှာ ပထမဆုံး အာအိုင်တီ သင်္ကြန် လုပ်တော့ သီချင်းဆိုခဲ့တယ်လေ...
Anonymous ... ဟုတ်လိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ရှင်...
ညီမလေး မြတ်နိုး ပြောတာ အားလုံးမှန်ပါတယ်ကွယ်...
မမသီတာ၊ မမ့ကွမ်၊ ကိုအောင်၊ မရီတာ... ကျေးဇူးပါနော်...
A ma .. love to share ur golden memories.
ထုတ်တော့ထုတ်ချင်သား..ကိုခိုင်ရေ... သာပေမဲ့ နှစ်၂၀လောက် နောက်ကျပြီးမှ သိရတော့ ခက်ပေါ့နော်...
မစု ကတာ ကြည့်ချင်တယ်ဗျို့။ ဗီဒီယိုရိုက်ပီး ဘလော့မှာ တင်ဖို့ မြှောက်ပေးပါတယ်။ သင်္ကြန်နာကျနေသူတွေကို အဆိုအကလေးနဲ့ ဖျော်ဖြေပေးပါ။
မစုကို ရေလာလောင်းသွားတယ်နော်။ ဥပုသ်မစောင့်သေးဘူး မဟုတ်လား။ သင်္ကြန်ရေအေးအေးလေး ခေါင်းပေါ်ကနေ လောင်းလိုက်တယ်။ :P
မမေရေ... စာလေးရေး၊ အသံလေး ပေးနေမိတာကတော်သေး သီးခံနိုင်ကြသေး... တော်နေကြာ လူရုပ်ကြီးမြင်ပြီး ဒီဘလော့ကို ဘယ်တော့မှ မလာတော့ဘူး... ရုပ်ဆိုးဆိုး အသက်ကြီးကြီးတွေ လုံးဝမကြည့်ချင်ဘူးလို့ စိုးလွင်လွင် သီချင်းဆိုနေကြမှ ခက်ပါလိမ့်မယ်ကွယ်... ဟီး
ဥပုသ်ကြီးနဲ့ဆိုလဲ ရေကုသိုလ်လို့ သဘောထားလိုက်တော့နော့...
၂၀၀၁ စလုံးမှာ ပထမဆုံး အာအိုင်တီ သင်္ကြန်
ဟုတ်လား - - - -နေအုံး-အဲဒါဆိုရင်
ဒီပို့စ်ဖတ်ရမှပဲ ကျောင်းကို လွမ်းလိုက်တာ စုချစ်ရေ ...
ဟင်... ဒါဆို အကိုဟယ်ရီကလဲ ကျောင်းကပဲပေါ့....
တကျောင်းထဲသား ဖြစ်ရလို့ ၀မ်းသာစရာ...
TU online said...
Civil က ဆရာဦးအောင်ကျော်မြတ် ဆိုတာ အရပ် ရှည်ရှည် နဲ့ ဆရာကြီးလား ... :)
မဟုတ်ဘူးလေ... ခပ်ပြည့်ပြည့်နဲ့ အရပ်နည်းနည်းလေးပုတယ်... MIT မှာလည်း သင်ဘူးတယ်... ပါချုပ်တောင် ဖြစ်သွားသေးတယ်မလား... အစ်မတို့က နောက်ပိုင်းဆရာနဲ့ မတွေ့ဖြစ်လို့ ဆရာဘယ်မှာ တာဝန်ကျနေလည်း မသိတော့ဘူး...း)
ဟိုတလောကပဲ ဆရာဦးအောင်ကျော်မြတ်က ခု သပနမှာ ညွှန်ချုပ်လုပ်နေပါတယ် ...